सरकारले स्टार्टअप बिजनेसलाई बुझ्नै सकेन, के हो स्टार्टअप ? - NA MediaNA Media सरकारले स्टार्टअप बिजनेसलाई बुझ्नै सकेन, के हो स्टार्टअप ? - NA Media
सरकारले स्टार्टअप बिजनेसलाई बुझ्नै सकेन, के हो स्टार्टअप ?
स्टार्टअप बिजनेसलाई सरकारले बुझ्न नसकको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हालसम्म सरकारले स्टार्टअप बिजनेसलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित नगरेको प्रति एप डेपलभरहरुले सरकारलाई समयमै सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्।
नयाँ पुस्तालाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा नलगाएको तथा खर्चको व्यवस्था नगरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
कृषि क्षेत्रमा इन्नोभेसनमार्फत् सक्रिय आरु एन्डी डि इनोभेसनकी प्रमुख सुनीता न्हेमाफुकीले कृषि क्षेत्रलाई उद्यमका रूपमा विकास नगरिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरिन्।
उनले भनिन्, ‘पेशा कृषि हो भन्छौं। जानेको छौं भन्छौं। तर, जानेकै हुँदैनौं।’ कृषि गरिरहेको पेशा भन्दै हेप्ने प्रवृत्ति भएकाले व्यवसायमुखी कृषि क्षेत्र नभएको बताइन्।
भिजिट भिसामा जानेहरुका लागि नयाँ नियम लागू, यी हुन् आवश्यक डकुमेन्टहरु
इलाम पुगेर डा केसीले सुरु गरे १६औं अनसन
पारिवारिक समाज नेपाल साउदी अरब द्वारा स्वेफ(CWEAF) नेपाल लाई सहयोग
जिफन्ट अध्यक्षमा विनोद श्रेष्ठ निर्वाचित